ကိုယ့်​ဖုန်းကိုအခြားသူ​ခေါ်ရင်​ သီချင်း​လေး​တွေထည့်​နည်း(ဆြာတွေကျော်သွားလိုက်ပါနော်)ခိ - Min Oaker
ဗဟုတုတဆိုင်ရာ နည်းလမ်းလေးများ ကိုယ့်​ဖုန်းကိုအခြားသူ​ခေါ်ရင်​ သီချင်း​လေး​တွေထည့်​နည်း(ဆြာတွေကျော်သွားလိုက်ပါနော်)ခိ
by Min Oaker on 5:46 AM in ဗဟုတုတဆိုင်ရာ နည်းလမ်းလေးများ
**All have the real/easy download links for you** ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တွေက အပေးသမားသတ်သတ်ပါ... သင်မနစ်နာပါဘူး.....ဒီမှာဘာကိုမှ ပိုက်ဆံနဲ့မရောင်းထားပါဘူး....သူငယ်ချင်းတို့အဆင်မပြေတာရှိရင် myblogspot.myblogspot@gmail.com ကို ဆက်လက်ပီး ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံနိုင်ပါတယ် ________________________________________________________________________________________________________________________________
လျှျူိ့ ၀ှက်နည်းပညာ . Powered by Blogger.
မင်္ဂလာပါ ... ကျွန်တော်ရဲ့ဝက်ဆိုက်လေးက ကြိုဆိုပါတယ် ခင်ဂျာ ....
Home » Mobile Technology » ကိုယ့်​ဖုန်းကိုအခြားသူ​ခေါ်ရင်​သီချင်း​လေး​တွေထည့်​ချင်​တဲ့သူငယ်​ချင်း​တွေအတွက်​
စာသားက​တော့ regလို့​ရေး​ပေးရမည်​။(မှတ်​ချက်​=ပိုက်​ဆံကဒ်​ထဲမှလစဉ်​ 2000ကျပ်​တိတိဖြတ်​ပါမည်​။)Step2.
အ​နေဖြင့်​သူချင်းဝယ်​ရပါမည်​ကိုယ်​ထည့်​လိုသည့်​သီချင်းကို012399994သို့ဖုန်းဆက်​ပြီး​တော့သီချင်းဝယ်​ချင်​​ကြောင်း​ပြောပြီး​ တော့သက်​ဆိုင်​ရာသီချင်းရဲ့ကုဒ်​နံပါတ်​ကို​တောင်းပြီး​တော့သူ​ ပေးတဲ့ကုဒ်​နံပါတ်​ကို​သေချာမှတ်​ပြီး​တော့
1772သို့ buy 000000....လိုိ့ပို့​ပေးလိုက်​ရင်​​တော့ပြီးဆုံးပါပြီ။
Ikamasutra ဖိုမ ဆက်ဆံ ရေး ကာမ ကျမ်း app for andriod (၁၈ နှစ်အထက်များသာလေ့လာရန်)
Ikamasutra ဖိုမ ဆက်ဆံ ရေး ကာမ ကျမ်း app for andriod (၁၈ နှစ်အထက်များသာလေ့လာရန်) Ikamasutra လို ခေါ်တဲ့ ဖိုမ ဆက်ဆံ ရေး ကာမ ကျမ်း app လေး ကု...
Zawgyi Keyboard for Windows 7,8,8.1(64-bit)
Zawgyi Keyboard for Windows 7,8,8.1(64-bit) Windows7(64-bit) အတွင်းတွင် Alpha Zawgyi Uni-code ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုသောအခါ စာရိုက် ...
online ကနေ ဥရောပ Premier League,Champion League အပါအ၀င် ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေ အားလုံးကို တိုက်ရိုက် (live) free ကြည့်ကြမယ်
ကွန်ပြူတာကနေကြည့်ဖို့ပါ ပထမအဆင့်အနေ နဲ့ live streaming football for premier league & all UEFA ဆိုတဲ့ လင...
Jailbreak မလုပ်ပဲ iOS 7.1, 7.1.1 နဲ့ 7.1.2 မှာ Myanmar font သွင်းနည်း လေးပါဗျာ.... ယာယီနည်းလမ်းလေးပါဗျာ... phone ကို res...
ကာလသားကြိုက် virtual girls desktop HD software လေးပါကွန်ပျူတာတွေအတွက် နော် အပြင်းအပြေနည်းပညာအသစ်လေးမို့ နားလည်ပေးပါ
ကာလသားကြိုက် အဟီ နည်းပညာအသစ်လေးမို့ပါ.... မမတို့လဲ လေ့လာလို့ရပါတယ် animated 3D sexy lady လေးတွေ မိမိ computer desktopပေါ်မှာ သရုပ်ဆောင်ေ...
အလန်းဆုံး PDF ဆော့ဝဲ ဆိုတာ အာမခံပါတယ် PDF file တွေကို edit လုပ်လို့ရတယ်(top secret)
ကွန်ပြူတာသမားတွေအတွက် PDF ဆိုတာမရှိမဖြစ်ပါ..... လူအများစုက သိပီးသား အဟောင်းတွေကိုပဲ အစွဲများပါတယ်.... တကယ်တော့ professional ဆိုတာ up to d...
ချစ်သူတွေ နှစ်ကိုယ်ကြား ဖုန်းခေါ်လို့ ရမယ့် Android Apk လေးပါ
နှစ်ယောက်တည်း ဆက်သွယ်ချင်သူတွေအတွက် Between.apk Android Device ပေါ်ကနေ ကိုယ့်မိတ်ဆွေနဲ့ သီးခြား ဆက်သွယ်ချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့...
unlock iphone and activate လုပ်​ကြမယ်​
Remove iphone Activation Lock Android ဖုန်း​တွေမှာဆိုရင်​​တော IMEI error​ခေါ်မှာ​ပေါ့ ဒါ​ပေမယ့်​iphone ​တွေမှာကပိုပြီး​ဆိုးပါတယ်​ ဘာမှလ...
iphone , ipad , ipod တွေသုံးပီး ဘယ် application ကကောင်းလဲမသိသေးသူများအတွက်....(အကောင်းဆုံး application လေးတွေ)Better Than Android***
iphone , ipad , ipod တွေသုံးပီး ဘယ် application ကကောင်းလဲမသိသေးသူများအတွက်.... Better Than Android***** ကဲညွှန်းမယ်ဗျာ.... jailbre...
ရွှေမြန်မာပြည် ရဲ့ အင်တာနက် ကို မိမိ mobile Phone နဲ့ ချိတ်ဆက်ဖို့ သိထားရမည့် နည်းပညာများ
Internet Settings ချိန်နည်းများ ၂သိန်းအင်တာနက်Settingချိန်နည်းနှင့်၁၅၀၀တန်အင်တာနက်Settingချိန်နည်းအပြည့် အစံ...
Greenify for rooted android တွေမှာ မရှိမဖြစ်ထဲ့ပီး...
root လုပ်ထားတဲ့ဖုန်းတွေရဲ့ အသက် Xposed Installer န...
Android Phone တွေမှာ မည်သည့် Task Killer App ကို မ...
Android kikat 4.4.2/3/4 version တွေမှာ internet br...
Android 4.3 ဖုန်းတွေtablet တွေအတွက် မိမိရဲ့camera ...
အတွေးလေးတိုင်းမှာ နင်ရှိတယ်ချစ်သူ(အရမ်းကြိုက်လို့ ...
Galaxy Note3 SM-N9005ကို မြန်မာစာOfficial 4.3 တင်ြ...
အသက် ၁၁၀ အဖွားဒေါ်ခွေး
ကို ရန် နိုင် တောင်းဆိုထားလို့ လင့်ပြန်ပြင်ပေးထား...
“Google.com.mm တွင် မြန်မာဘာသာဖြင့် ပြောင်းလဲအသုံး...
အဟတ်ခံရတဲ့ Facebook အကောင့်ပြန်ယူနည်း
Toucher PRO (Android ဖုန်းသမားတွေ နုတ်ပတ်သမားတွေ အ...
Startup Manager (Android ဖုန်းမှာ battery ကုန်သက်သ...
Themer apk (android တွေမှာ ဟိုဟာယောင်ယောင်ဒီဟာယောင...
VideoShow Pro - Video Editor v2.2.7 (Andriod ဖုန်း...
Pixlr Express 2.2.1 For Android (photo နဲ့ပက်သက်လိ...
n7player Music Player (Full) v2.3e Apk (***အတော်ကေ...
Android Phone တွေအတွက် အသင့်လျော်ဆုံးနဲ့ အကောင်းဆု...
Android Phone တွေ အတွက်အလန်းဆုံး youtube apk ပါ......
Samsaung Galaxy Note III Update Kitkat Android Ver...
Viber Sticker hack နည်း(100% working Any Andriod D...
Sansung မဟုတ်​တဲ့ Android ဖုန်း​တွေမှာ Dropbox GB...
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ရဲ. စာကြည့်တိုက်နံရံပေါ်က အချက်၂၀ ဆုံ...
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ လောက၀ိဇယလမ်းစဉ် နှင့် ဓမ္မအမေးအဖြေ - အပို...
နည်းစနစ်ကျကျအတွေးအခေါ် အလုပ်ကနေပဲ Retired ယူလို့ရတ...
Gas မီးဖိုနဲ့ ချက်ပြုပ်သူများသတိထားပါ။
ပြည်ပရောက် မြန်မာပြည်သားများ အကြားအမြင်ရှိစေချင်
By Min Oaker at 5:46 AM